ZMO qalabka oxygen-soociddiisa xuub - Shiinaha Hangzhou Poly Air Qalabka Kala
Shaqaynta mabda'a. hawada tilmaantay Tifaftirayaasha iyada oo qalab saabsanaa isdaahirinta, hawada si loo soo saaro waxyaalihii nijaasta adag sida saliidda, ciidda iyo biyaha iskiis ugu, nidaamka kala go'idda xuub ah, xuub-soociddiisa waa nooc ka mid ah caag godkii integratedcomponent dogob fiber micro. Cadaadis, dhammaan noocyada kala duwan ee adsorption gaaska, in membranediffusion fiber godkii, heerka wax lays of kala duwan, ee isku xigxiga, waxaan wici hoyiyay gaaska ratefor "gaaska degdeg ah", sida oxygen, heerka hoyiyay uumiga biyaha; s ...
hawada tilmaantay Tifaftirayaasha iyada oo qalab saabsanaa isdaahirinta, hawada si loo soo saaro waxyaalihii nijaasta adag sida saliidda, ciidda iyo biyaha iskiis ugu, nidaamka kala go'idda xuub ah, xuub-soociddiisa waa nooc ka mid ah caag godkii integratedcomponent dogob fiber micro. Cadaadis, dhammaan noocyada kala duwan ee adsorption gaaska, in membranediffusion fiber godkii, heerka wax lays of kala duwan, ee isku xigxiga, waxaan wici hoyiyay gaaska ratefor "gaaska degdeg ah", sida oxygen, heerka hoyiyay uumiga biyaha; yar "hakiyo" gaaska, sida nitrogen. gaaska Mixed dhex xuub, "gaaska degdeg ah" waxaa ku hodanaynta in thelow-karka ka baxsan, "hakiyo" gaaska waa hodan in cadaadis sarreeya oo ka dhex, si torealize kala oxygen iyo nitrogen. Under gacanta ugu PLC ogaan kartaa oxygen saarka saarka deggan Joogta ah.
1, geeddi-socodka waa mid fudud, qaab-dhismeedka is haysta, aad dhaqaale ahaan iyo daboolo baahiyaha kala duwan ee dadka isticmaala nitrogen;
2, qayb xuub ee caabiga kar, khasaaraha cadaadis hoose ah, raali galin lahayd cadaadiska nitrogen iyo dadka isticmaala sare;
3, biiro waalka iyo qaybaha kale u dhaqaaqo, hawlgalka ma guurto ah, heerka failure yar yahay, culayska dayactirka waa dayactirka yar;
4, qalab uu leeyahay faa'iidooyinka goobta shaqo yar, iyo waxaa loo isticmaali karaa hawlgalka gudaha iyo mobile;
5, module dhafan design ka xuub caadiga ah, iyadoo la kordhinayo qayb-soociddiisa xuub si fudud ku dhameysatay fidinta awoodda wax soo saarka nitrogen;
6, shahaadada sare ee qalabaynta, baabuur dhigashada ku haboon; gaari gasconcentration wax soo saarka 10 daqiiqo gudahood ah;
7, habka hawlgalka qalab iyo sanqadh lahayn, wasakhaynta lahayn, gaaska wax soo saarka nadiif ah, dhibic sayaxa hooseeyo.
In 8, sari taageeraya codsiyada, waxaa degan faa'iido aad u weyn in nidaamka kala go'idda hawada, tamarta hawlgalka hoose.
Iyo wax soo saarka oxygen: 1 ~ 30000Nm3 / h, fiirsashada oxygen 30%, maalgashiga membranemethod, dayactirka iyo isticmaalka kharashka waa kaliya cryogenic iyo (V) by PSA70% ilaa 80%, iyo baaxadda weyn habka xuub dhaqaale, dheeraad ah.
Oo oxygen daahirnimo 30% ~ 45% (laba fasal ka khayroon daahirnimo oxygen-soociddiisa: 90%).
Previous: ZMN nitrogen-soociddiisa xuub qalabka soo saara
Next: VPSA qalabka vacuum dhalin oxygen
ZMN nitrogen-soociddiisa xuub qalabka soo saara